News 18 Nepal || आइपीएल अक्सनमा सन्दीप किन भए अनसोल्ड ? यस्ता छन् कारण
आइपीएल अक्सनमा सन्दीप किन भए अनसोल्ड ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं । नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२१ को अक्सनमा अनसोल्ड भएका छन् । दिल्ली क्यापिटल्सबाट फुकुवा भएपछि सन्दीप महँगो मूल्यमा अन्य टोलीमा जाने अपेक्षाका साथ बिहिबार अक्सनलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरेका थिए । न्यूनतम मूल्य ४० लाखमा उनलाई खरिद गर्न कुनैपनि टोलीले रुचि देखाएनन् ।
सन्दीप अघि अफगानिस्तान स्पिनर मुजिब उर रहमान, न्युजिल्यान्डका ईश सोधी, इंग्ल्यान्डका अलराउन्डर आदिल राशिद अनसोल्ड भई सकेका थिए । अन्तिममा मुजिबलाई सनराइजर्स हैदराबादले खरिद गरेको थियो । सन्दीपलाई दिल्लीले सन् २०१८ मा न्यूनतम मूल्य २० लाख भारुमा खरिद गरेपछि आइपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका थिए ।
सन्दीपले त्यस वर्ष अन्तिम तीन खेलमा मौका पाउँदै पाँच विकेट लिँदै उत्कृष्ट अन्त्य गरेपछि उनको अन्य विदेशी लिगमा माग बढेको थियो । त्यसपछि विश्वका अन्य चर्चित फ्रेन्चाइज लिगमा लगातार खेल्दै आएका सन्दीपलाई यस सिजनमा भने दिल्लीले फुकुवा गरेको थियो । सन्दीपले २०१९ मा ६ खेलमा ९ विकेट लिएका थिए । २०२० मा पुरै खेलमा बेन्चमा राखेको थियो ।
मेघा अक्सन नभएको हुँदा सन्दीप दिल्लीलाई स्पिनर आवश्यक भएको भए टोलीमै बस्न सक्थे । दिल्लीले आवश्यक नहुँदा फुकुवा गर्दै अन्य टोलीको बाटो खुल्ला गरेको थियो । तर सन्दीपलाई कुनैपनि टोलीले किनेनन् । सन्दीप अनसोल्ड हुनुका पाँच कारण यस प्रकार छन् ।
अक्सनमा सबै फ्रेन्चाइज टोली तीव्र गतिका विदेशी अनुबन्ध गर्न चाहान्थे । काइल जामिसन, क्रिस मोरिस, झेय रिचर्डसन लगायतका बलर महँगो मूल्यमा विक्नुको मुख्य कारण तीव्र गतिका बलरको अत्याधिक आवश्यकता हो । अक्सनमा महँगो विक्ने प्राय तीव्र गतिका बलर रहे । अक्सनमा एक टोलीले बढीमा २५ खेलाडी राख्न पाउँछन् । जसमा बढीमा ८ विदेशी खेलाडी राख्न पाइन्छ । स्पिनर आवश्यक भएका टोलीले पनि भारतीय खेलाडीबाट पूर्ति गर्दै विदेशी तीव्र गतिका बलर अनुबन्ध गरेपछि सन्दीपमाथि मूल्य लाग्न सकेन ।
सन्दीपले पछिल्लो तीन वर्षमा लगातार फ्रेन्चाइज लिग र नेपालबाट खेल्दै आएका छन् । तर, उनको ब्याटिङ र फिल्डिङ भने कमजोर पाइन्छ । अक्सनमा पन्जाब, राजस्थान र मुम्बईलाई स्पिनरको आवश्यक थियो । पन्जाबले वेस्टइन्डिजका फबियन एलेनलाई खरिद गर्यो । चेन्नईले मोईन अली र कोलकाताले सकिब अल हसनलाई टोलीमा अनुबन्ध गर्यो । यी तीनै स्पिनर राम्रो ब्याटिङका लागि परिचित छन् । सन्दीपको ब्याटिङ र फिल्डिङ कमजोर छ । त्यसैले फ्रेन्चाइज टोलीको रुचि गएन ।
सन्दीपले लगातार विदेशी फ्रेन्चाइज लिग खेलि रहेका छन् । जसले सन्दीपको ब्याट्सम्यान र फ्रेन्चाइज टोलीलाई कमजोरी थाहा भई सकेको छ । सन्दीपले लेगस्पिनर र गुगली गर्ने गर्दछन् । सन्दीपसँग यी दुई बाहेक अन्य खासै स्पिनरमा भेराइटी देखिदैन । सन्दीपले एउटै शैलीमा निरन्तर बलिङ गरि रहेका छन् । जुन शैलीमा विपक्षी ब्याट्सम्यानले राम्रो अभ्यास र होमवर्क गरेर आउँछन् ।
सन्दीपले बिग ब्यास लिग २०२०/२१ होबार्ट हरिकेन्सबाट खेलेका थिए । ८ खेलमा ८ विकेट मात्र लिन सके । तीन खेलमा विकेट विहिन बनेका थिए । सन्दीपले लगातार विदेशी लिग खेल्दै आएका छन् । तर म्याच विनिङ प्रर्दशन भने गर्न सकेका छैनन् । सबै प्रतियोगितामा उनको प्रर्दशन औसत पाइन्छ । विदेशी कोटामा फ्रेन्चाइज टोली सकेसम्म म्याच विनर चाहान्छन् । त्यसैले सन्दीप प्रति फ्रेन्चाइज टोलीको रुचि घट्न थालेको छ ।